Obbo Efrem Tasammaa
Obbo Efrem Tasammaa Featured
Bara barnootaa 2010fi qophiisaa
Biiroon Barnoota Oromiyaa ergamaafi mul'ata qabatee hojiin barnootaa naannichaa akka milkaa'uuf ciminaan tattaafachaa jira. Biirichi tattaaffiisaa kanaan dhaloota dorgomaafi gama hundaan gahoome horachuuf abbaa dhimmichaa kan ta'e, hawaasa of maddii hiriirsee hojjetaa jira.
Biirichi baranas akkuma kanaan duraa milkaa'ina hojii baruufi barsiisuu naannichaa milkeesuuf mariifi leenjii sadarkaa adda addaatiin taasisu ittifufeera. Adeemsa kanaan kan darbe qorachaa kan ittifufuuf kallattii keewwatee duula wallaalummaarratti bane geggeessaa jira.
Gama kanaan Karoora Guddinaafi Tiraanisformeeshinii (KGT) jalqabaa keessatti maniin damee barnootaatiin qabames qulqullina barnootaa mirkaneessuufi uwwisa tajaajilaasaas cimsuudha.
Tattaaffii cimaa taasifameenis akka biyyaatti hirmaannaan barnoota sadarkaa 1fa dhibbantaa 92n gahuun kan danda'ame yoo ta'u, walmaddaalliin ijoollee dubaraafi dhiiraas harka 0.94 qaqqabeera. Kunis manii gama barnootaatiin qabame akka milkeessu itti amanameera. Kana keessaas Oromiyaan qooda guddaa qaba jechuudha.
KGT 2fa keessattis qulqullina barnootaa mirkaneessuuf gama dandeettii hoggansa barnootaa cimsuu, misooma barnootaa, fooyyessa sirna barnootaa, fooyyessa manneen barnootaafi TQO irratti hojiilee babal'oon akka raawwatamaniifi raawwatamaa jiraniidha Biiroon Barnoota Oromiyaa kan ibse.
Hogganaa ittaanaan biirichaa, Obbo Efrem Tasammaa qophii bara barnootaa 2010f taasifamaa jiru ilaalchisuun ibsa tibbana Gaazexaa Bariisaatiif kennaniin akka jedhanitti, biiroonsaaniis ta'e mootummaan naannichaa dhimma barnootaarratti yeroo kamuu caalaa xiyyeeffatee hojjetaa jira.
Keessumaa milkaa'ina baruu barsiisuu baranaatiif leenjiin hawaasa manneen barnootaa mara hirmaachise Fulbaana 4 irraa eegalee hanga torban xumuraa baatii kanaatti kennameera.
Kana keessattis barsiisonni, supparvaayizaroonnifi hoggansa manneen barnootaa walumatti namoota kuma 16 hirmaachuusaanii dubbatanii, leenjichis ogeessota barnootaa Biiroo Barnoota Oromiyaarraa babahaniin wiirtuulee saddeetitti akka kennameedha hoggantichi kan himan.
Warri leenji dhimma sosochii hawaasaarratti xiyyeeffate kun barsiisotaafi hawaasa manneen barnootaa mootummaa, dhuunfaafi hawaasaatiif guutummaa Oromiyaatti manneen barnootaa kuma 15fi 731tti kennameera jedhu Obbo Efreem.
Dhuma Fulbaanaatti dursitoonni daree keessatti barattootaaf guyyoota sadiif leenjii kan kennan ta'uus himanii, ittaansuun maatiifi kutaalee hawaasaa dhimmi barnootaa ilaallatu maraaf leenjiin guyyaa tokkoo ni kennama jedhaniiru.
Leenjiin sosochii hawaasaa dhimmamtoota barnootaa hunda hirmaachisee qophii barnootaa bara 2010 irratti xiyyeeffatee kennamaa jiru kun qooda fudhannaa ummataa cimsuurratti kan bu'uureffateefi raawwii barnootaa bara 2009 qorachuun kallattii karoora baranaarrattis ni mariyatama jedhaniiru.
Kana malees barsiisummaan haalduree kamiinuu kan hindaangeffamne waan ta'eef mataduree, “Ogummaa maatummaafi lammummaati” jedhuun leenjichi kennamaa jiraachuu ibsanii, ogummaan kun haalota kaminuu kan daangeffamu waan hintaaneef kanarratti fakkeenyi biyyoota gadda addaa fudhatamuusaa beeksisaniiru. Hojmaata bu'a qabeessa barnootaafi leenjii (deelivarolojii) irrattis leenjichi kennamaa jiraachuu ibsu.
Waa'ee qulqullina barnootaarratti hojmaata haaraa mataduree, “Geengoo qulqullina barnootaa” jedhamuun haalatti jaarmiyaalee adda addaa hirmaachisuun gurmuudhaan qulqullina barnootaa mirkaneessuun danda'amurratti akkasumas rakkoolee barnoota Oromiyaa keessatti waggoota darbanitti calaqqisaa turanittis qo'annoon qophaa'ee hirmaattota leenjichaatiif ni dhiyaata jedhaniiru. Barnoota lammummaafi amala gaariirratti, waa'ee barumsa Afaan Oromoofi sirni barnootaa xiyyeeffannoo leenjichaa ta'uus himaniiru.
Akka Oromiyaatti barnoota barana Fulbaana 18 jalqabameen barattoota miliyoona 9.4 barsiisuuf yaadamee hojiitti seenameera. Galmeessi barattootaa haala gaariin yoo geggeeffamaa turellee sababoota adda addaatiin hanqinoonni jiraachuus ibsu.
Lolaan sababa guutiinsa Laga Awaashiin uumame danqaa guddaa ta'uusaafi kanaanis manneen barnootaa bakka qubannaa hawaasa buqqa'ee dubbatu. Manneen barnootaa tokko tokko ammoo lolichaan miidhamaniiru jedhu.
Ongeen adeemsa barnootaarratti miidhaa qaqqabsiise jiraachuu kan ibsan Obbo Efreem, bakkeewwan kanneenitti barattoonni baay'inaan kan hingalmoofne ta'uu eeru. Sababa rakkoo daangaa Oromiyaafi Somaalee Itoophiyaa jidduutti uumamee tureenis godinaalee Booranaa, Baalee, Gujiifi Harargee lamaanitti barataan hangi eegamu galmaa'uu hindandeenye jedhu.
Daa'imman umriinsaanii barnootaaf ga'e mara barsiisuuf qophii gahaan taasifamuusaafi kanaanis caasaalee barnootaa dabalee sektaroonni hundi qindoominaan hojjetaa jiraachuu ibs. Gareeleen afur rakkoolee guutiinsa Laga Awaashiin walqabateefi gama daangaatiin uumame irratti xiyyeeffatanii ragaa sassaabaa akka jiranis ni himu.
Tibbi kun yeroo barnootaa waan ta'eef namni umriinsaa barumsaaf gahe hundi barachuu waan qabuuf naannawawwan rakkoon uumame kanneenitti manneen barnootaa socho'aan (mobaayiliin) ni banamu kan jedhan Obbo Efreem, kunis hanga lammiin sababoota adda addaatiin qe'eesaarraa buqqa'e bakka ofiitti deebi'utti tooftaalee gara garaatiin barumsa ittifufuuf kan yaadameedha jedhu.
Hogganaan waajjira barnootaa Godina Shawaa Kaabaa Obbo Koraa Guutaa leenjii barsiisotaa Magaalaa Fiicheetti adeemsifamerratti akka ibsanitti, leenjichi barsiisaan hojiifi ittigaafatamummaasaa hubatee yeroo kamuu caalaa mirkanaa'ina qulqullina barnootaatiif xiyyeeffannaan akka hojjetu gochuuf gargaara jedhu.
Dimshaashumatti bara barnootaa kanatti keessumaa barattoonni yeroo kamuu caalaa raayyaa barnootaatiin gurmaa'anii walirraa barataa beekumsa ga'umsa qabu, kan egeree biyyaatiif abdii ta'u akka gonfachuuf xiyyeeffannaan hojechuu qabu.
Torban kana/This_Week 11898
Torban darbe/This_Month 91735
Guyyaa mara/All_Days 1603693